ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် မန္တလေး. ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပည
ⓘ ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် မန္တလေး. ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခင်အမည် ဆေးဘက်ပညာသည်တက္ကသိုလ ..
ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခင်အမည် ဆေးဘက်ပညာသည်တက္ကသိုလ် မှ ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကို သင်ကြားပေးသော တက္ကသိုလ် ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်သည် ၄ နှစ်ကြာသင်ယူရသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ အတွက် အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ် ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး ဆေးပညာ၊ ဓာတ်မှန်ပညာနှင့် ဆေးဝါးနည်းပညာ များကို သင်ကြားပေးသည်။ နှစ်စဉ် ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ ၁၈၀ ခန့် လက်ခံသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။